Tottenham Oo Man City Ka Cidhibtirtay Champions League+SAWIRRO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Tottenham Oo Man City Ka Cidhibtirtay Champions League+SAWIRRO
Tottenham ayaa si layaableh ugu soo baxday afar dhamaadka UEFA Champions league kadib markii ay kulan waali ahaa oo Etihad Stadium ka dhacay ay Man City kaga cidhibtirtay tartankan. Man City iyo Tottenham ayaa iska dhaliyay 7 gool oo waliba afar ka mid ah la dhaliyay 21 kii daqiiqo ee ugu horeeyay.
Kooxaha Manchester City iyo Tottenham ayaa soo bandhigay mid ka mid ah kulamadii ugu xamaasada badnaa ee kubbada cagta Yurub ee ay kooxo Ingiriis ahi iskaga hor yimaadeen iyada oo Son iyo Sterling ay min laba gool daliyeen.
Tottenham ayaa ku soo baxday sharciga goolasha iyada oo Man City guul ku gaadhay 4-3 balse ay Tottenham hore gool ugu soo dhalisay kulankii lugtii hore taas oo ka dhigtay in Spurs ay ku soo gudbeen wadarta labada kulan oo 4-4 ah waxaana soo saaray sharciga goolasha martida ah.
Kaydka: Ben Davies, Davinson Sanchez, Fernando Llorente, Juan Foyth, Paulo Gazzaniga, Oliver Skipp, Kyle Walker-Peters.
Kaydka: Nicolas Otamendi, John Stones, Ari Muric, Riyad Mahrez, Fernandinho, Leroy Sane, Gabriel Jesus.
Man City iyo Tottenham ayaa qaybtii hore ee ciyaarta soo bandhigay gool dhalin waali ah iyada oo 21 kii daqiiqo ee ciyaarta ugu horeeyay layska dhaliyay shan gool waxayna labada kooxood qaateen 20 daqiiqo oo waali ah oo taariikhda Champions league lagu qoray,.
Daqiiqadii 4 aad ee bilawgii ciyaarta Man City ayaa markiiiba heshay goolkeeda furitaanka kadib markii uu Raheem Sterling si cajiib ah u dhamaystiray kubbad caawin uu sameeyay De Bruyne wuxuuna Sterling ciyaarta ka dhigay 1-0 ay City ku soo celisay goolkii ay Tottenham kaga soo badisay kulankii lugtii hore.
Daqiiqadii 7 aad oo ah saddex daqiiqo kadib markii ay Man City goolka furitaanka dhalisay waxaa jawaab cajiib ah bixisay Tottenham kadib markii uu Son Heung-Min helay fursada uu difaaca City ku ciqaabay isaga oo dhaliyay goolka xaalada waalida ah ciyaarta ku bilaabay iyada oo ciyaartu noqotay barbaro 1-1 ah.
Daqiiqadii 10 aad Tottenham ayaa si layaableh ciyaarta dhinaca kale ugu dhigtay Man City waxaana goolkiisa labaad saddex daqiiqo gudahood ku dhaliyay Son Heung-Min kaas oo Spurs siiyay waxyna markii ay City goolka ku hormartay ka fikirin iyada oo ciyaartu noqotay 2-1 ay Tottenham hogaanka kula wareegtay.
Daqiiqadii 11 aad Man City ayaa si toos ah uga jawaabtay goolasha deg dega ahaa ee Tottenham waxaana markooda ciyaarta ku soo celiyay Bernardo Silva kaas oo caawin ka helay Dany Rose oo ay kubbadu ku sii dhacday waxayna ciyaartu noqotay babraro 2-2 ah.
Wax aan la rumaysan karin ayay noqotay in 11 daqiiqo ay Man City iyo Tottenham iskaga dhaliyeen afar gool waxaana bilawday waqti hubanti la’aan ah oo ay labada kooxood bilaabeen in ay ka fikiraan waxa ciyaarta ka dhici kara.
Daqiiqadii 21 aad Man City ayaa markii labaad qabtay hogaanka ciyaarta kadib markii uu Raheem Sterling dhaliyay goolkiisa labaad isaga oo si sahan kubbad ugu qabtay goolka Spurs iyada oo De Bruyne uu sameeyay caawinta labaad ee goolkan waxayna ciyaartu noqotay 3-2 ay Man Cityhogaanka ku soo ceshatay.
Labada kooxood ayaa dadaal badan bixiyay si ay gool dhalintan waalida ah u sii wadaan laakiin Man City ayaa la wareegtay kubbad haynta iyo fursad abuurista waxayna Tottenham la kulantay dhibaato dhaawac iyada oo dhamaadkii qaybtii hore uu dhaawac soo gaadhay M. Sissoko waxaana booskiisa buuxiyay Llorente.
Kadib markii shan gool layska dhaliyay 21 kii daqiiqo ee ciyaarta ugu horeeyay, waxay labada kooxood intaas ku joojiyeen layaabkii ay qaybtii hore sameeyeen waxaana lagu kala nastay 3-2 ay City hogaanka ku haysay.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta Man City ayaa soo laabtay iyada oo dhaarsan waxayna goolhaye Lloris ku qasbeen in uu sameeyo gool badbaadino layaableh isaga oo daqiiqadihii 51 iyo 55 aad saddex fursadood oo cajiib ah ka beeniyay Man City.
Fernando Llorente ayaa isna Tottenham u helay fursad fiican waxayna ciyaartu noqotay mid Man City laga filan karayay in ay gool dhalintii ciyaarta halkeeda ka sii wadi karto.
Daqiiqadii 59 aad Man City ayaa keensatay goolka ay shaqada badan u soo qabtay waxaana gool dhaliyaasha kulankan ka mid noqday Sergio Aguero kaas oo dhamaystiray kubbad caawintii saddexaad ee uu De Bruyne kulankan ka sameeyay waxayna ciyaartu noqotay 4-2 ay Man City ugu danbayn awooda si buuxda ula wareegtay.
Daqiiqadii 73 aad Alla Maxay Waali Ahayd! Tottenham ayaa keensatay goolkeeda saddexaad waxaana farxadii Man City xumeeyay Fernando Llorente waxaana goolka laga hubiyay VAR iyada oo uu noqday gool sharci ah oo ay Spurs xaalad xun ugu abuurta Ma City waxayna ciyaartu noqotay 4-3 ay Man City ku hadhsan tahay.
Daqiiqadii 94 aad Man City ayaa gool la timid kadib markii uu Raheem Sterling shabaqa Tottenham gaadhay waxaana bilawday dabaal deg waali ah oo uu Etihad Stadium la dumi gaadhay, laakiin markii ay City dabaal degii dhamaysatay waxaa goolka looga hubiyay offside.
QALBIJABKII CITY! Waxaa cadaatay in uu offside cadaan ahi jiray wuxuuna VAR noqtay kan badbaadiyay Tottenham isla markaana dabaal degii Man City burburiyay waxayna ciyaartu ku dhamatay 4-3 ay Man City guul ku gaadhay balse ay Tottenham afar dhamaadka UEFA Champions League ugu soo baxday sharciga goolasha martida ah.
Tottenham ayaa wajihi doonta kooxda Ajax iyada oo Guardiola uu markale la kulmay waji gabax ee tartanka UEFA Champions league waana kulan si wayn loo sugayo waxay kala yeeli doonaan labada kooxood.